Nubia Red Magic 3 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain | Androidsis
Nubia Red Magic 3 dad badan ayaa arkaa sida casriga ugu fiican ciyaaraha aan iibsan karno hadda kujira Android. La soo bandhigay horeyba bil ka hor, Daahfurka moodelkan ayaa la filayay dhammaadka Maajo. Taariikh la xaqiijiyay shirkadda lafteeda taasna hadda waxay noqoneysaa mid dhab ah. Sababtoo ah taleefannadan casriga ah ee noocyadu horay ayey u soo galeen suuqa Isbaanishka. Taleefan dagaal badan siin kara.
Qaabkan ayaa si rasmi ah looga bilaabay Spain, markaa kuwa isticmaala ee raadinaya casriga ciyaaraha waxay leeyihiin fursad wanaagsan oo ay ku tixgeliyaan tan Nubia Red Magic 3. Waxay sidoo kale la timid qiimo weyn oo lacag ah.
Taleefankan casriga ah ayaa horay loogu sii daayay websaydhka rasmiga ah ee shirkadda, halkaas oo ay awalba suurtagal ahayd in laga iibsado In kastoo la filayo taas laga bilaabo Maajo 31 ayaan horay u iibsan karnaa tan Nubia Red Magic 3 dukaamo badan oo ku yaal Spain. Marka sugitaanka inaad ku iibsan karto dukaamada jirka aad ayey ugu gaaban tahay dareenkan.
Sidaan soo sheegnay, qiimuhu waa mid kamid ah furayaasha taleefankan sumadda Shiinaha. Sababta oo ah tusaalahan waxaa lagu bilaabay qiimo dhan 479 euro isku darka kaliya ee 8/128 GB. Waxaa lagu iibinayaa madow. Waxaa jira nooc labaad oo taleefanka ah, oo leh 12/256 GB, kaas oo lagu bilaabay midabyo casaan ah iyo daabac daabacaad leh, oo qiimihiisu yahay 599 euro.
Shaki la'aan, qiimaha ay Nubia Red Magic 3 naga tagayso waa wax layaableh oo u hooseeya taleefannada casriga ah ee noocyadan kala duwan ku jira, kaas oo la yimaada Snapdragon 855 oo ah processor-kiisa. Tani waa wax si weyn u caawin kara iibinta qalabka Spain. Tan iyo markii ay abuuri doonto xiiso badan qaybtaan.
Waxay noqon kartaa daah fur kaas oo sumaduhu ay guul ka gaaraan Isbaanish. Marka waa inaan aragnaa sida tan Nubia Red Magic 3 loogu helo dukaamada gudaha Isbaanishka markay bilaabato toddobaadkan. Qeybta taleefannada casriga ah ee ciyaaraha ayaa sii kordheysa, iyada oo moodooyin cusub ay ku dhex jiraan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Nubia Red Magic 3 ayaa si rasmi ah u timid Spain
Qaar ka mid ah Galaxy S10 waxay la kulmaan guuldarrooyin ka dib cusbooneysiintii ugu dambeysay
Oukitel K12, Xiaomi Redmi Note 7 iyo isbarbardhiga nolosha batteriga ee iPhone XS